>ကဗဵာဆရာုကီး ဦးတင်မိုး ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁ိံစြ်ူပည့် ဆမြ်းကေဋ္ဋး
>300 miles to walk to raise Burmese awareness
> ကဗျာဆရာ ဇော်(ပျဉ်းမနား) ကွယ်လွန်ခြင်း ၉ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေး မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၄၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၊ ၂၀၀၉ က ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဖက်မုဒ်၊ သုဓမ္မာရုံကျောင်းတိုက်၊ အောင်မေတ္တာကျောင်းဆောင်မှာ ကဗျာဆရာ၏ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု၊ ကဗျာဆရာမိတ်ဆွေနှင့် ကဗျာဆရာများ စုဝေးပြီး ဆွမ်းကျွေးအလှူပြုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ တက်ရောက်လာသည့် ကဗျာဆရာများထဲမှ ညွန့်သစ်၊ အောင်ဇင်မင်း၊ ကိုခါး(ကွမ်းခြံကုန်း)၊ သူရဇော်တို့က ကဗျာများ အမှတ်တရ ရွတ်ဆိုကြသည်ဟု သိရသည်။ နံနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီက စတင်သည့် အလှူပွဲသည် နေ့လည် ၂ နာရီခန့်တွင် ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲနှင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဇော် (ပျဉ်းမနား) သည်...
> ရန်ကုန်မြို့တွင် တနေ့တည်း ဗုံး နှစ်ကြိမ်ကွဲ အေပီသတင်း မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့ စံတော်ချိန်၊ မတ် ၃၊ ညနေ ၉ နာရီ ခွဲက မြေနီကုန်းလမ်းဆုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ည ၁၁ နာရီတွင် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ ဘတ်စကားဂိတ်တွင် နောက်ထပ် ဗုံးတလုံး ပေါက်ခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းက ဆိုသည်။ စစ်တပ်နှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ ချက်ခြင်း ရောက်ရှိလာပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို ပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်တို့က ပြောသည်။ အာဏာပိုင်တို့က ထိခိုက်သူ မရှိဟု ပြောကြောင်း သိရသည်။ မေလ ၇ ရက် ၂၀၀၅ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ ၂၀...
>Tawbayar Lay Literary Award hosted at family’s home
> တော်ဘုရားလေး စာပေဆု မိသားစုနေအိမ်မှာ ကျင်းပရ မိုးမခအထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ခု ရက်နေ့မှာ တော်ဘုရားလေး စာပေဆုပေးပွဲကို စီးတီးစတားဟိုတယ်တွင်ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းက ခွင့်မပြုခဲ့သောကြောင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို တော်ဘုရားလေး၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေ၀ီသန့်စင်နေအိမ်၌ အကျဉ်းချုံးကျင်းပခဲ့သည်။ ထို အခမ်းအနားသို့ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီး၊ အယ်ဒီတာများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ပန်းချီဆရာများ အနုပညာသမားများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ကြသည်။ တော်ဘုရားလေးစာပေဆုတွင် ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဆုကို မန္တလေးမှ စာရေးဆရာ ညိုထွန်းလူ မှ ရရှိခဲ့ပြီး မဂ္ဂဇင်းအကောင်းဆုံးဆုကို ပိတောက်ပွင့်သစ်မှ ရရှိခဲ့သည်။ တော်ဘုရားလေး စာပေဆုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည်။...
> ခရီး ……ဒေါင်းရိုင်းမတ် ၃၊ ၂ဝဝ၉ ပန်းပွင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အခေါ်လွှတ်လိုက်တော့ကျနော်လာခဲ့ပြီ ……..။ မုန်တိုင်းနက်တွေဟာလိုဏ်ခေါင်းဖြူတွေကိုဆေးဆိုးတဲ့အချိန် …..။ ပင်လယ်နီဟာ ကွဲဖြာထွက်တန်ခိုးရှင်ရဲ့ မြင်းဖြူတော်တွေကို စီးပြီး …..ဖြတ်သန်းခဲ့သူတွေလိုပေါ့ ……. ကျနော် လာခဲ့တယ်ကျနော့်ကို ဝိုင်းနေတဲ့တိမ်ထု တိမ်တောင်တွေကို မ ချီ ရိုက်ချိုးလို့မဟာသမုဒ္ဒရာ အစင်းစင်းထဲမှာ နှစ်မြှုတ်ပြီးကျနော်လာခဲ့တယ် ………..။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Junior Win – Hope
> မျှော်လင့်ချက် ဂျူနီယာဝင်း (အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ၂၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉) မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ Hope – George Frederick Watts(1817-1904) George Frederick Watts(1817-1904) ရေးဆွဲသော Hope (မျှော်လင့်ချက်) အမည်ရှိပန်းချီကား တချပ်အကြောင်း။ ရေးဆွဲသူကအင်္ဂလိပ်လူမျိူး George Frederick ကပန်းချီဆရာ၊ပန်းပုဆရာကြီး ဖြစ်သည်။ ပန်းချီကား ပုံတူပေါင်း ၃၀၀ လောက် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုပုံတူများထဲတွင် အီတလီလူမျိူး နိုင်ငံရေးသမား Guisseppe Garibaldi နှင့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ကဗျာဆရာ Robert Browning, Alfred Lord Tennyson တုိ့ ပါဝင်သည်။ သူ့ကို လန်ဒန်မှာ မွေးသည်။ သူက...
> ဒီလ သူ ဘာဖတ်နေသလဲ၊ မဂ္ဂဇိန်ဒိုင်ဂျက် မာတိကာသစ် မဂ္ဂဇိန် သာဂိ မတ် ၂၊ ၂၀၀၉ စာအုပ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူများညွှန်းတာတွေလည်း ဖတ်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအတွက် ညွှန်းတာလည်း ပါတယ်။ ပြီးတော့ စာရေးသူအချင်းချင်းကလည်း သူတို့ ဘာညွှန်းသလဲ သိချင်တော့ အညွှန်းတွေကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖတ်တယ်။ အားလုံးအတွက်မဟုတ်ရင်တောင်မှာ မာတိကာအသစ်တခုလောက် စဉ်ကြည့်တဲ့ သဘော။ ပိတောက်ပွင့်သစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ စက္ကူမြင်း တောင်တွင်း ရထား – မောင်သစ်တည် (မြသန်းတင့်) (ကဗျာ) ကြည်နိုင် – လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲက တံခါးအိုတချုပ်နှင့် ဆရာမြသန်းတင့် (ဆောင်းပါး) မောင်သွေးချွန် – ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ ကယန်း(ပဒေါင်)မလေးက ရွာကို...
>New year message from Burmese Junta to its neighbors
> New year message from Burmese Junta to its neighborsApril 14, 2008(Recollection …) Cartoon Beruma No tags for this post. Related posts No related posts.
>Nyan Si – Myitkyina 7
> မြစ်ကြီးနား ၇ ညံစီ မတ် ၂၊ ၂၀၀၉ ကြောက်မှန်ကြည့်သူတွေ အုတ်ရိုး အိမ်အိုနား ခဏ ခဏ မလာစေနဲ့ကွယ်။ ပလတ်စတစ်အပုံထဲကနေ ခုန် ခုန် ထွက်နေရတဲ့ လမင်းခင်ဗျာ။ သူငယ်ပြန်နေတာ အကောင်းမှတ်လို့ လူအဟောင်း ရောင်းလို့ မရဘူး အန်ကယ် စကားအပြန်အလှန် ပြောတာ မစင်ထုပ် ရွှေချတာမှ မဟုတ်တာ ရိပ်သာသွားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ နံရံတိုင်းမှာ သမိုင်းရှိတယ် အုတ်တိုက်ထဲမှာ ဦးပဲငိုက်ငိုက် ဦးပဲ စိုက်စိုက် အန်ကယ်ကြိုက်ရင်တော့ ဂုစ္ဆာမလည်း ဒေ၀စ္ဆရာပါပဲ။ တောက် … ထမင်းနဲ့ ကောက်ပေါက်လို့ နဖူးကွဲသွားမယ်။ မြေမှာကြဲတဲ့ စပါးလုံးတွေ။ ။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉) No tags for...
> အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ သာကေတ (၁) မဲဆန္ဒနယ်အမတ် ဦးမောင်မောင်လတ် (ခ) ဒေါက်တာလှိုင်နီ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ် မိုးမခအထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၁၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ကုသဆောင်မှာ ၁နှစ်နဲ့ ၉ လကြာ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက် (၂၀၀၉) တနင်္ဂနွေနေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီ သာကေတ (၁) မဲဆန္ဒနယ်အမတ် ဦးမောင်မောင်လတ် (ခ) ဒေါက်တာလှိုင်နီ၊ အသက် ၅၉ နှစ်ရဲ့ ဈာပနကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ နံနက် ၁၀ နာရီက ရေဝေးသုဿန်မှာ သင်္ဂြိုလ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာလှိုင်နီရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားနာ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈၊ (၂၀၀၉)...
>Mar Mar Aye – 266
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၆)“ထူးမခြားနား” သီချင်းခန့်၏ နောက်ဆက်တွဲမာမာအေးမတ် ၁၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ – ပြီးခဲ့အပတ်က ‘ထူးမခြားနား ရောင်ခြည်တော်ဘွဲ့’ သီချင်းစာသားတွေ မတူတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဂီတဝိသောဓနီ စုစည်းထုတ်ဝေ စီစဉ်ခဲ့သူတွေအကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကျန်ခဲ့တာ တခုက ‘ထူးမခြားနား’သီချင်းခန့်ကို မြဝတီဦးစ ရေးတယ် မရေးဘူး ဝိဝါဒ ကွဲနေတဲ့ကိစ္စပါ။ ဂီတလူကြီးဝိုင်းမှာ ကြွက်စီ ကြွက်စီ ဒီကိစ္စကို ကြားဖူးသော်လဲ ခလေးပဲ ဘာဆိုင်တာလိုက်လို့ ဆိုပြီး အနားတောင် မသီခဲ့တော့ပါဘူး၊ အခု လူကြီးဖြစ်မှ နှောင်းလူတို့အတွက် ခိုင်မာအောင်ထားခဲ့သင့်တယ်လို့ ရှာဖွေလေ့လာ ပျော်စရာ...
>Than Soe Hlaing – Today Local Economy Perspective
> ယနေ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ပုံရိပ် သန်းစိုးလှိုင် မတ်လ ၁၊ ၂၀၀၉ လောင်စာဆီဈေး အကျနဲ့ အကြပ်၊ မြန်မာငွေလဲနှုန်း မြင့်လာ၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ၀ယ်အား သိသိသာသာ ကျဆင်း၊ နေ့စဉ် နေထိုင်မှု စရိတ်က လျော့မကျ လောင်စာဆီဈေး အကျနဲ့ အကြပ် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တွေက တဂါလံ ၄၈၀၀၊ ၅၀၀၀ ကျပ်ရှိခဲ့သည့် ဒီဇယ်ဆီက ယခု ၁၅၀၀အောက်ရောက်နေပြီ။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်ှ လောင်စာဆီ အပြင်ပေါက်ဈေးက အစိုးရဈေးထက် သက်သာနေသည်။ ခါတိုင်း အစိုးရလောင်စာဆီခွဲတမ်းကို အားကိုးပြီး လောင်စာဆီထုတ်ရောင်း ခြင်းဖြင့် ကားပိုင်ဆိုင်မှုမှ ၀င်ငွေ ရနေသည့် အခြေအနေက ယခု ပြောင်းပြန် ဇောက်ထိုး ဖြစ်ကာ ခွဲတမ်းကို...
>Kyi Maung Than & Thit Kaung Eain – Two Poems for A Brother
> ညီလေးအတွက် မောရသုတ် ကြည်မောင်သန်း၊ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ညီလေး ကြည်မောင်သန်း ညီလေး ငါတို့ ဘယ်တော့မှ ထွက်မပြေးဘူး ထွက်မပြေးဘူး ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ သစ္စာ ညီလေး ခုဆို မင်းက အတွင်းကြေ ငါတို့က အပြင်ကြေ ညီလေး သွေးဟာ သွေးပဲ ဘယ်တော့မှ ရေ မဖြစ်ဘူး ညီလေး ညီညီလွင်က ပြာတယ် မင်းအတွက် နေ့စဉ် မောရသုတ် ရွတ်မယ်တဲ့ ညီလေး သိန်းသိန်းကပြောတယ် ပျော်လို့ ခုန်ချကြတာပဲ ဒုက္ခ ခံကြရမှာပေါ့တဲ့ ညီလေး ရဲဌေးက ပြောတယ် ငါတို့တွေ ရှင်ကွဲပါကွာ မကြာခင် ပြန်တွေ့ကြရမှာပါတဲ့ ဟုတ်တယ် ညီလေးရေ သေကွဲပေါင်းများစွာ ငါတို့...
>Kyaw Kyaw – Are you waiting for everyday ?
> နေ့တိုင်းမျှော်နေရအုံးမယ်ကျော်ကျော်ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ လုပ်နေကျ အရာတခုခုကို နေ့စဉ်လုပ်နေရင်းကနေ မသိမသာ အဲဒီဟာကို စွဲလမ်းမှန်းမသိ စွဲလမ်းသွားတတ်တယ်။ စွဲလမ်းသွားပြီ ဆိုလဲ ဖြတ်ဖို့ ပြန်ပြင်ဖို့ကလည်း တော်တော်ခက်တယ်။ ဆေးလိပ်စွဲတယ်၊ အရက်စွဲတယ်၊ ကွမ်းယာစွဲတယ် ဒါတွေက လူအများသိပြီးကြားပြီးသားပါ။ တစ်ချို့အရာတွေကျတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွဲနေမှန်းမသိဘူး၊ နေ့စဉ် ပုံမှန်အချိန်မှန်တော့ လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ ရန်ကုန်ကို စရောက်တုန်းကအချိန်ကို မှတ်မိသေးတယ်။ နေရာသစ်မှာ အသိမိတ်ဆွေကလည်း မရှိ၊ နယ်က အပေါင်းအသင်းတွေကလည်း ရန်ကုန်ကို တခါတလေမှ ရောက်လာတတ်တာဆိုတော့ တော်တော် ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ နေ့တိုင်း မနက်အိပ်ရာထ မနက်စာစားပြီးရင် ကျနော် အဓိက မျှော်နေတတ်တာ တခုကတော့ သတင်းစာပါပဲ (မြန်မာ့အလင်းလား၊ လုပ်သားလား မမှတ်မိတော့ဘူး)။ နေ့တိုင်းလာနေကျ သတင်းစာလေးကို ဖတ်လိုက်ရမှ...
> အာဆီယံအစည်းအဝေးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက မြန်မာ အမျိုးသမီးတဦးကို ၀င်ခွင့်မပြုမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၃မတ် ၁၊ ၂၀၀၉ မခင်ဥမ္မာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ အကြပ်ကိုင်မှုကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)က လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မြန်မာပြည်သား မခင်ဥမ္မာကို လက်ရှိပြုလုပ်နေသော အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်ရန် ယမန်နေ့က တားမြစ်လိုက်သည်။ မခင်ဥမ္မာအား ပါဝင် တက်ရောက်ခွင့် ပြုပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များက ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချအမ်းမြို့တွင် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ အစိုးရ ၀န်ကြီးများ ပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးကို ၃ ရက်ကြာ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ကမ္ဘောဒီးယားမှ Pen...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ စိုက်ဆင်းလေပြင်းသတင်း မမှန်ဟု မိုးဇလက ငြင်း။ အဝေးပြေးကားလုပ်ငန်းများ ကျောင်းပိတ်ချိန်ကို မျှော်။ လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က ဓာတ်ပုံဝက်ဆိုက်။ ဖြူသီမွေးနေ့ သီတဂူဆရာတော် တက်ရောက်ချီးမြှင့်။ သီတဂူဆရာတော် ၇၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ စစ်ကိုင်းတောင် သီတဂူတက္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဖွင့်ပွဲနှင့် အခြားအခမ်းအနားများ စည်ကားစွာဖြင့် လာမည့် မတ် ၅ တွင် ကျင်းပမည်။ ပီအေစီစင်တာများ မြန်မာပြည်တွင် ၄၀၉ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်။ ငွေ ၂ သိန်းနဲ့ ဆော်ဒီသွားနိုင်ပြီ။ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ့။ No tags for this post....
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၅) နိုင်ငံရေး နှင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာပေထိန်လင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ခေတ်တစ်ခုရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာ အဲဒီခေတ်မှာ ရှင်သန်နေသူတွေအပေါ် မူတည်သလို ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း အဲဒီခေတ်အခါမှာ ရှင်သန်နေသူတွေပဲ အနီးဆုံး ခံစားကြရပါတယ်။ အတိတ်ခေတ်တွေရဲ့ ကောင်းမွေဆိုးမွေတွေကို နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာ ခံစားရတာဖြစ်ပေမယ့် လတ်တလော ခံစားရတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာအချိန်ကာလမှာ ရှင်သန်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ကောင်းရင်ကောင်းသလို လူထုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊ အခြေခံအခွင့်အရေး စတဲ့ အရာတွေ ပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ဆိုးပြီ၊ စနစ်ဆိုးပြီဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သမျှအားလုံး ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာပဲ ရုန်းကန်ရှင်သန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရှင်သန်ရတဲ့အခါ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတွေ ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာလည်း ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိခေတ်ကာလမှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်...
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၇)‘ကျောင်းသား သမဂ္ဂနှင့် လွတ်လပ်ရေး’ အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို အခုလို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်။ (၁)လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်၌ ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော ဘဝကို ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်(၂)မိမိကိုယ် မိမိအားကိုး၍ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော ဘဝကိုဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့်(၃)တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိတတ်သော စိတ်ဓာတ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ နယ်ချဲ့လက်အောက် ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါလ (၃၁)ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန် သက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (တကသ) ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ၁၉၃၆ မေလ (၈)ရက် ဒုတိယ တက္ကသိုလ် သပိတ်ကြီးမှာ ကနဦး ဗကသ လို့ ခေါ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ABSU) ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီ တကသ၊...
> ဖေဖော်ဝါရီ စာကိုး၊ စကားကိုးဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉ “အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ အထဲမှာ ဒါရိုက်တာကစလို့ အဆင့်ပေါင်းစုံသော ဝန်ထမ်းတွေ ပါပါတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ကလွဲလို့ သူတို့မှာ ဘာအကျိုးခံစားမှုမှ မရှိပါဘူး။ ရင်နာစရာပါ။ – – မြန်မာ ဝန်ထမ်းတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုရင် လေယာဉ်လက်မှတ် ဈေးနူန်းတွေက အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ၂ဆကျော်ကျော်လောက် ပိုများလို့ပါ။ – – – ဒါ့ကြောင့် အတ္တလန်တစ် ဟိုတယ်က ဖြုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ မြန်မာဝန်ထမ်း တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စပဲ ပါပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲလွန်းလှတဲ့ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ဒီအချိန်မှာ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်”နှင်းနဲ့မာယာ၊ ဘလော်ဂါmysterysnow.blogspot.com ဖေဖော်ဝါရီ ၁ “နေမထွက်ခင်ကတည်းက တမျှော်မျှော် စောင့်နေရသော်လည်း နေမြင့်သည့်တိုင် ပေါ်မလာတတ်။ လူတွေလည်း...
> ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ စော်ဘွားကြီးကုန်းတွင် ရိုက်နှက်ခံရမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၄ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ဒဂုံတက္ကသိုလ် တတိယနှစ် ဘူမိဗေဒ ကျောင်းသား ၄ ဦး နှင့် နည်းပြဆရာ တဦး တို့ကို အရက်သမားတချို့က ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ စော်ဘွားကြီးကုန်းရှိ ဒို့ရိုးရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ အထွက်တွင် အနားရှိ အရက်ဆိုင်အတွင်းမှ လူ ၇ ဦးက ရန်စပြီး ကိုဝေဖြိုးကျော် (တတိယနှစ် ဘူမိဗေဒ) အား စတင် ထိုးကြိတ်ခဲ့သည်။ ၀င်ရောက် တားဆီးသော နည်းပြဆရာ ဦးအောင်မင်းဦးလည်း နောက်မှ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် အခြားကျောင်းသားများ ဖြစ်သော ကိုပြည့်နိုင်ဖြိုး၊ ကိုအောင်ဖုန်း၊ ကိုနေလင်းထက် တို့လည်း ရိုက်နှက်ခံရသည်။ ကိုဝေဖြိုးကျော်က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး...
> ခင်ခင်ပျိုရေ သို့ ကဗျာများ အောင်ချိမ့် နဲ့ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ခင်ခင်ပျိုရေ စောင့်ခဲ့တယ် အောင်ချိမ့် တရက်ကို ငါ ဘာလို့ မစောင့်နိုင်ရမှာလဲ ငါ စောင့်ခဲ့တယ်။ မီးလျှံလို ကြိုးတန်းမှာ လိမ်ညှစ်လှန်းထားတဲ့ အ၀တ်လို ပျောက်ဆုံးသော အရာ ငါ စောင့်ခဲ့တယ်။ ခင်ခင်ပျို ရေ ငါ စောင့်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်က ပြောစရာရှိပြီး သူက ပြောစရာ မရှိတော့သော ယတိပြတ်မှုကို ငါ ချိန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ငါ စောင့်ခဲ့တယ်။ (အောင်ချိမ့်၊ ပိတော်ပွင့်သစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉) ခင်ခင်ပျိုရေ … ညနေခင်းဆို လေတွေပြို သစ်ကောင်းအိမ် တောမီးလောင်နေချိန်မှာ တောကြောင်တွေ လမ်းသလားနေတာ ဆန်းသလား...
> ရန်ကုန်တွင် မီးပြတ်တောက်မှု ပိုဆိုးဝါး၊ နေပြည်တော်မှာ မီးထိန်ထိန်သာ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ယခုလအတွင်းမှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့တွင် မီးပြတ်တောက်မှုများ ဆိုးဝါးလာသည်ဟု မြို့ခံတို့က ပြောကြားသည်။ ယနေ့ညဉ့်နက်ပိုင်းမှ မီးလာသဖြင့် မိသားစုများက မီးဖိုချောင်ကိစ္စ၊ ရေချိုးခန်းကိစ္စများကို စောင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ရကြောင်း၊ နေ့ခင်းနှင့် ညပိုင်းတွင်သုံးရန် ဘက္ထရီများ အားသွင်းရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။ “အခု တပတ်လုံးလုံး ဆင်ခြေဖုံးအရပ်တော်တော်များများမှာ နေ့ခင်းနဲ့ ညဦးပိုင်းမှာ မီးမလာဘူး။ အရင်က တရက်ပျက်၊ တရက်လာ၊ နောက်တော့ တပိုင်းစီ ပျက်၊ တပိုင်းစီလာ။ အခုတော့ တပတ်လုံးပျက်ပြီး မနက် ၁ နာရီကနေ ၃ နာရီလောက်ထိ လာတော့တယ်”...
> ငါးကျမ်းပြန်ကျောင်းတိုက်၊ နာဂစ်သင့် မ်ိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေး ရန်ပုံငွေဖြင့် ကလေး ၅၀၀ ကျော်ကို ကူညီခဲ့ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ မေလ ၂ နှင့် ၃ ရက်၊ ၂၀၀၈ က တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးကြောင့် မိဘ ၂ ပါး မဲ့ခဲ့ရသည့် ကလေးသူငယ်များကို စာရင်းပြုစုပြီး ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးနေသော ငါးကျမ်းပြန်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်များဦးဆောင်သည့် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ကလေး ဦးရေ ၅၆၀ ကို လစဉ်ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မန္တလေးမြို့ ဖောင်တောင်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသော နာဂစ်သင့် ခိုကိုးရာမဲ့ ကလေးသူငယ်များထဲမှ ၂ ဖက်မိဘမဲ့သူ ၂၀ ဦးရေ၎င်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း...
> 9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part5Daw Mar Mar Aye No tags for this post. Related posts No related posts.
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း (၁ဝ)မှတ်စုမှတ်တမ်းဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉ ဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း တသမတ်တည်းမဟုတ် ဆွဲလိုက်၊ ရပ်လိုက် လုပ်တော့ ခံရတဲ့လူဟာ တအော်တည်းအော်နေရပြီး ညနေကြမှ အသံပျောက်သွားပါတယ်လို့ ထပ်မံ သိရှိရတယ်။ ရွာထဲရှိအိမ်တချို့မှာလည်း သေနတ်ဒဏ်ကြောင့် ပေါက်ပြဲနေတာ တွေ့ရသလို ရွာနည်းစပ်သစ်ပင် တွေမှာလည်း ကျိုးပဲ့နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဟင်္သာရွာကို ပါပါတို့ရောက်တဲ့နေ့ဟာ ကချင်အမျိုးသား နဲ့ ချိန်းဆိုထားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ညမိုးချုပ်သော်လည်း ပေါ်လာသည်ကို မတွေ့ရပါ။ နောက်တနေ့ ထပ်မံ စောင့်ပါတယ်။ သို့သော် အရိပ်အရောင်မျှ မတွေ့။ နိုဝင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်သို့မဟုတ် (၁၁) ရက်မှာ ဟင်္သာရွာသို့ သူအရောက်လာမယ့်အကြောင်း မြတောင် တောရမှာ ဦးစောအောင်ခင်လှ ရှေ့မှာ ပါပါကို သူ ပြောတယ်။...
> သတင်းထောက် တဦး၏ နာဂစ်ဒိုင်ယာရီ သန်းစိုးလှိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ ဧပြီလ ၂၉၊ ၃၀ရက်၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပူပြင်းလှသည့် နွေရာသီ ဧပြီလ၏ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်၊ မိုးကသည်းထန်စွာ ရက်ဆက်ရွာသွန်းနေခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်နေသည်လား၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသည်လား တခုခု ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု အင်တာနက်သတင်းများမှာ စေ့ငုကြည့်တော့ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီတိုင်းကို ၀င်ဖို့ အလားအလာရှိနေသည် ဟုဧပြီလ ကုန် ၂၈၊၂၉ ရက်ဝန်းကျင်တွင် ဖတ်ရှုရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးဝင်ခဲ့သည့် ဆီဒါ အမည်ရှိသည့် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းလောက် မပြင်းထန်နိုင်ပေမယ့် ဆိုင်ကလုန်း အဆင့် အားဖြင့် ၁ မှာရှိသဖြင့် ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကြီးမား သည့်မုန်တိုင်း...
> ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ အားကစားသတင်းများ ၀င်းလက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ တိုက်ဂါးဝုဒ် ပြန်လာပြီ သန်းကြွှယ်သူဌေး ဂေါက်သီးချန်ပီယံဟောင်း တိုက်ဂါးဝုဒ်သည် ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အချိန်အတော်ကြာ အနားယူနေရာမှ နာလန်ထလာပြီး ဂေါက်သီးလောကသို့တကျော့ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာပါပြီဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဘက်ဟောင်း ၂သင်း ပြန်လည် တွေဆုံ ချန်ပီယံလိဂ် ပထမအကျော့ အင်္ဂါနေ့ ည ရှုံးထွက်ပွဲတွင် အင်တာမီလန် အသင်းသည် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအား ဆန်စီရို အိမ်ကွင်းတွင် အနိုင်ယူ မကစားနိုင်ဘဲ သရေပွဲဖြင့် ကျေနပ်လိုက်ရသည်။ ဤရလဒ်ကို နှစ်ဘက်နည်းပြများက မျှတသည်ဟု ထင်မြင်ချက် ပေးသွားပါသည်။ ထို့အပြင် ဤပွဲသည် သူတို့ နှစ်ဦး၏ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တလျှောက်တွင် ပွဲ (၂၀)မြောက်...
> ဧရာဝတီကို တရားစွဲမည်ဟုဆိုသည့် ဦးကျော်မြင့် နှင့် ဗွီအိုအေ အင်တာဗျူးVOA ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ VOA – ဦးကျော်မြင့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျုံယွမ်ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက ငွေကြေးနဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာတွေအတွက် စစ်အစိုးရကနေပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရဖူးတယ်လို့ စွပ်စွဲထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဘာကြောင့်မို့ ဦးကျော်မြင့် အနေနဲ့ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတာလဲခင်ဗျ။UKM – ကျနော် ၉၇ ခုနှစ်တုန်းက စစ်အစိုးရနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တာ ငွေကြေးစီးပွားရေးပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိက နိုင်ငံရေးပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ၅(ည)ပေါ့။ ကျနော်တို့ ငွေရေး ကြေးရေး စီးပွားရေး ထောင်ဒဏ်ချတာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ ချထားတာ ၅(ည)၊ နိုင်ငံတော် ဆန့်ကျင်မှုပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ထောင်ဒဏ်ချတာပါခင်ဗျ။...
> သမီးအတွက် ဖတ်စာ ဇေမှိုင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ သမီးရေ ဟောဒီ တောင်ကုန်းပြောင်ပြောင်ကြီး တွေက အရင်က လွမ်းမောဖွယ် ပေါ့ကွယ် ခုတော့ သမီးလိုချင်တဲ့ ပန်းမာလ်တွေ မရှိတော့ … သမီးရေ ကုန်းခေါင်ခေါင် ရေနစ်တဲ့ သူလည်းအများကြီး ခင်မင်တွယ်တာတယ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး ဆေးဘက်ပဲ … အမုန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ … ပျော်ရွှင်စရာမလိုဘူး ရုန်းကန်ရမှာ ချစ်ခင်ကြသော ကမ္ဘာအဖြစ် ရုန်းကန်ရမှာ … သမီးလေး အစ်ကို နဲ့ ညီမလေးကိုပါ ချစ်ခင်တတ်အောင် သင်ပါ အရိုင်းတွေ အောက်မှာ မြွေဆိုး ပေါတော့ ရိုင်း မဆုံး ဖြစ်မှာ … သမီးရေ တောင်တန်းတွေဆီသွားပါ အပွင့်ပြာပြာ...
> ယခုတလော ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အက်ဒ်ဝဲ (Adware) တင့်လွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ ကွန်ပျူတာ သုံးနေရာမှ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်သည့် အခါ နကိုတင်ထားသည့် desktop background “ဒက်စတော့ နောက်ခံရုပ်ပုံ”မှာ မရှိတော့ဘဲ အမဲရောင်မျက်နှာပြင် အလယ်တွင် စာတမ်းသာပေါ်နေတော့သည်။ ထို့ပြင် ညာဘက် အောက် တပ်ခ့်စ်ဘား (taskbar)တွင်လည်း မကြာခဏ အသံပေးခါ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ၀က်ဆိုက် တခုဖြစ်သည့် Antivirus XP ကို အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ကာ ၀ယ်ဖို့ချည်းပြောနေတော့သည်။ အဆိုပါ (tab) တက်ဘ်ကို ပိတ်လိုက်လည်း ခဏသာခံပြီး မကြာမီ ပြန်ပေါ်လာပြန်သည်။ တပ်ခ့်စ် ဘား တွင်လည်း သတိပေး စာတန်းက မိနစ်မပြတ်ပေါ်ကာ မြင်ကွင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေး နေတော့သည်။...
> ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် အကျဉ်းသား ၆ဝဝဝ ကျော်လွှတ်ပေးသော်လည်း တိုးတက်မှုမရှိသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ အစာအဆိပ်သင့်၍ သေဆုံးခဲ့သည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ၊ အမေရိကရောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့၊ မုန်တိုင်းကြောင့် ပူပြင်းမည့် နွေရာသီ စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ အောင်ဝေး၏ ကဗျာ – ဗျာဒိတ် လူထုဒေါ်အမာ၏ ဆောင်းပါး – ဆိုင်းပြိုင်တီးရာမှာ ဆရာစိန်ဗေဒါ မရှုမလှ ရှုံးတဲ့ပွဲ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 838 of 908«1...836837838839840...908»